२ हजारका लागि आफ्नै बुबाको घाँ’टी थि’चेर ह’त्या गरे (भिडियो हेर्नुस) – Nep Stok
२ हजारका लागि आफ्नै बुबाको घाँ’टी थि’चेर ह’त्या गरे (भिडियो हेर्नुस)
माघ १५, २०७८ शनिबार 314
मोरङको बेलबारिमा एक छोराले आफ्नै बाउको ह’त्या गरेका छन । राती करिव ९/१० बजेको समयमा म’दिरा सेव’न गरि घर आएका छोराले वृद्ध बाबू घाँ’टी थि’ची ह’त्या गरेको स्थानियहरुले जानकारी दिएका छन ।
एक्कासि राती मदि’रा से’वन गरि घर आएका छोराले बाबुलाई लछा’रपछा’र गरि घाँ’टी थि’च्न थाले पछि जेठी छोरिले चि’च्या’एर सबै स्थानिय छरछिमेकिहरुलाई बोलाएको स्थानियले बताएका छन । तर स्थानिय छिमेकिहरु पुग्दा बाबुको ज्या’न गै सकेको अवस्थामा भेटिएको उनिहरुले बताए ।
प्रत्यक्षदर्शी नातिनि गंगा न्यौपानेका अनुसार राती र’क्सिले मा’तेर आएका बुबा जय न्यौपानेले हजुरबुबा दलबहादुर न्यौपानेको घाँ’टी थि’ची ह’त्या गरेको बताएकी छिन । राती करिव १० बजे तिर बुबा जय घर आएको गंगाले बताईन ।
बुबा घर आएर आफुलाई उठाउन खोज्दा हजुरबुवाले जाडो छ सुति सकेकी नतिनिलाई नउठा भने पछि बुबा र हजुरबुबाको झग’डा भएको गंगाले बताएकी छिन । र’क्सि मा’तेर आएको हुनाले बुबाले हजुरबुबाको घाँ’टी थि’चेर मा’रेको उनले बताईन ।
आफुलाई नउठाउनु भनी हजुरबुवाले भने पछि पहिले बुबाले हजुरबुबालाई अ’नुहा’रमा मु’क्काले हिर्का’एको पनि गंगाले बताएकी छिन । त्यस पछि भुईमा लडा’एर घाँ’टी थि’चेको गंगाले बताएकी छिन । त्यो बेला घरमा हजुरआमा आफू र हजुरबुवा मात्र रहेको उनको भनाई छ । त्यही बेला बुबा आएर हजुरबुबाको ह’त्या गरेको उनले बताएकी छिन । आफुले हजुरबुबाको घाँ’टी थि’चे’को देखे पछि चिच्चा’एको भएता पनि नजिकै घरमा बिबाह भएको र त्यहाँ गित बजेकोले कसैले नसुनेको उनको भनाई छ ।
नजिकै रहेको बिहे घरमा सबै जना गएको र त्यहा बुफर निकै ठूलो साउन्डमा बजेकोले कसैले नसुनेको उनको भनाई छ । त्यस पछि आफू बोलाउन भनी अर्को घरमा गएको गंगाले बताईन । आफुले अरुलाई बोलाएर ल्याउदा सम्म हजुरबुवाको मृ’त्युु भै सकेको गंगाको भनाई छ । आफू फर्केर घर गए पछि भु’ईमा ल’डा’एको हजुरबुवालाई उठाएर बुबाले खाटमा राखेको गंगाले बताएकी छिन । अहिले जयलाई प्रह’रीले पक्रा’उ गरि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
केही दिन अघि दुई बाबू आमाले आफ्नो वृद्धभत्ता बापत को रकम लिएराएको स्थानियहरु बताउँछन । त्यही वृद्धभताको २ हजार रुपैयाँ छोरालाई मल किनेर ल्याउनका लागि बाबुले दिएका थिए । तर छोराले मल किनेर घर ल्याउनुको सट्टा उक्त पैसाले मदिरा सेवन गरि जताभाबी बोल्दै हिड्ने, हो हल्ला गर्ने जस्ता काम गरेर अन्य स्थानिया छिमेकिहरुलाई पनि तना’व दिएको उनिहरुले बताए । गाउँमा बिबाह भएकोले सबै स्थानियहरु त्यही बिबाहमा भएको अवस्थामा अन्दाजी ३५/३६ वर्षीय छोराले मदिरा सेवन गरि घरमा आएर बाबुको ह’त्या गरेको उनिहरुको भनाई छ । (भिडियो हेर्नुस)
Prevतपाइको यो साता कति शुभः ? हेर्नुहोस् माघ १६ गते देखी माघ २२ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
Nextबच्चालाइ अर्को कोठामा राखेर ३० बर्षिया डाक्टरले छोडिन संसार
एकाएक सरकारले गर्यो लकडाउन गर्ने घोषणा कहिले बाट? हेर्नुहोस सूचना
पाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन, पुस २४ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल